ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင် Rhino | Slotjar ကာစီနို - ထိပ်တန်းပေးချေမှု, အွန်လိုင်း & ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ်မိုဘိုင်း slot £5+ £ 200 အခမဲ့!
100% £ 200 အထိဆုကြေးငွေမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် အခုတော့ Play
Unlike the conventional online slots that have five reels, Raging Rhino Slot Bonus comes with six reels and four rows. As you advance into different levels, you get around 4096 ways to win to land on winning combinations and use free spin offers. There are four rows of symbols that enhances the scope to bag winning combos. The symbols that have lower value constitute 9, 10, J ကို, မေး, K သည်, and A, while the higher value ones include some wild animals like mongoose, alligator, cheetah, baboon, andarhinoceros. All these animals are portrayed with nice graphics.
Once you are able to get the scatter symbol of the big diamond, the main bonus feature will activate. If you are able to land three, four, five and six diamonds, you will get 8, 15, 20 နှင့် 50 spins respectively. Moreover, you can get 2x or 3x multipliers on your existing wins. If you are able to land the big diamond scatter symbol you will be getting free spins. You can land up to six diamonds and get the following spins:
3 diamonds: 8 လှည့်ခြင်းများ
4 diamonds: 15 လှည့်ခြင်းများ
5 diamonds: 20 လှည့်ခြင်းများ
6 diamonds: 50 လှည့်ခြင်းများ
If you love animal-themed slots, ဤ Raging Rhino Slot Bonus is the right place to land at and win some amazing payouts for yourself.
Related Posts များ:Robin Hood – Prince of TweetsWild Wild West: The Great Train Heistသက်တန့်စည်းစိမ်ဥစ္စာရှန်ဂရီလာ, LaJungle Spirit: Call of the WildWarlords: Crystals of Power အခုတော့ Play
Stuttle ဎ ကိုယ့်အပေါ်အနိုင်ရ Starmania
Malone: ​​D ကိုယ့်အပေါ်အနိုင်ရ ကစားတဲ့နထေိုငျ
P ကို ​​Williams က ကိုယ့်အပေါ်အနိုင်ရ Starburst Touch ကို™
အဲလစ် W က ကိုယ့်အပေါ်အနိုင်ရ Gorilla Go ကိုတောရိုင်း
ZYCH M က ကိုယ့်အပေါ်အနိုင်ရ အသီးဆိုင်
Grimshaw ကို C ကိုယ့်အပေါ်အနိုင်ရ သက်တန့်စည်းစိမ်ဥစ္စာ
တယ်ရီ N ကို ကိုယ့်အပေါ်အနိုင်ရ Starburst Touch ကို™
Talbot က S ကိုယ့်အပေါ်အနိုင်ရ ဟောင်ကောင်မျှော်စင်
စယ် L ကို ကိုယ့်အပေါ်အနိုင်ရ အပိုငွေ!!
K သည်ကျီ ကိုယ့်အပေါ်အနိုင်ရ ရတနာ Strike
SlotJar.com Suite ၏ ProgressPlay လီမိတက်ကလုပ်ကိုင်နေသည် 1258, 28/19 Vincenti အဆောက်အ, ရေလက်ကြားလမ်း – Valletta VLT1432 – မော်လ်တာ. ProgressPlay မော်လ်တာအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် (C58305), တစ်အတန်းအစားအောက်တွင်လည်ပတ် 1 အပေါ်4လိုင်စင် [16 ဧပြီအပေါ်ထုတ်ပေးအရေအတွက်ကို MGA / CL1 / 857/2012 2013] & [အရေအတွက်အား MGA / CL1 / 957/2014] 19 ဧပြီအပေါ်ထုတ်ပေး 2014 & [16 ဒီဇင်ဘာလအပေါ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် / 1141/2015 အရေအတွက်ကို MGA / CL1 2015] မော်လ်တာဂိမ်းအာဏာပိုင်များကထုတ်ပေးနှင့်နေဖြင့်လိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် ဗြိတိန်လောင်းကစားကော်မရှင်, လိုင်စင်နံပါတ် 000-039335-R-319313-008. ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေတစ်ဆင့် wagering ဗြိတိန်ပုဂ္ဂိုလ်များဗြိတိန်လောင်းကစားကော်မရှင်ကထုတ်ပေးလိုင်စင်အပေါ်မှီခိုအတွက်ဒါလုပ်နေတာ. လောင်းကစားစွဲလမ်းနိုင်ပါတယ်. တာဝန်သိ Play. မူပိုင်ခွင့်© SlotJar. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.